Akụkọ gbasara BLI - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Ụmụ akwụkwọ nwere afọ ojuju kemgbe 1976
Ndị ọrụ nkuzi a raara onwe ha nye na nke omiiko na nkwanye mmekọrịta dị mma bụ nke IMI, bụ nke mechara nweta ụlọ akwụkwọ ọzọ na isi obodo Quebec.
Ụlọ akwụkwọ anyị dị na Quebec na-enye ohere maka ọzụzụ nke ụmụ akwụkwọ mba ụwa n'asụsụ French.
Kemgbe ahụ, BLI na-emezi usoro ya iji zute mkpa na ọdịmma nke ụmụ akwụkwọ. N'oge a, BLI bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ asụsụ kachasị amara na ụwa ma na-enye mmemme dịgasị iche iche maka ụmụ akwụkwọ si n'ọdịbendị dị iche iche na ebe dị iche iche.
N'ebe ọrụ ụlọ ọrụ, BLI ọ bụghị nanị na-aga n'ihu inye ọzụzụ mmụta asụsụ ndị a haziri ahazi, ma na-anapụtakwa asụsụ asụsụ dịka nsụgharị, nyocha, nyochaa, wdg. Ndị ahịa anyị nwere ụlọ ọrụ dị iche iche dị ka Deloitte, Coca Cola, Hydro Quebec, wdg.